Umthetho ophathelene nezinkampani ezenza womshado nomndeni inikeza ukwesekwa zenkampani yangaphandle bayizakhamuzi abakwazi balwele amalungelo abo. Ikakhulukazi, izinkambiso zomthetho lokulawula umkhuba wokusebenzisa sivikelwe, inkampani yangaphandle angenza ngaphansi okuyinto esitokisini imisebenzi. Ezimweni eziningi, lokhu kusebenza izingane ezincane ngaphandle abazali. Ukusiza izakhamuzi osemusha eza umnakekeli - umuntu, ngezinga elithile uyangenelela ukubalekela imithwalo yemfanelo yokuba umzali. UMthetho olawula imithetho londolozi angaqokelwa futhi kuvunywe namalungelo akhe kanye nemithwalo yemfanelo.
umnakekeli umsebenzi ongenza umuntu iyahlangabezana nezidingo yamazinga zomthetho emkhakheni sivikelwe. Kulesi umsebenzi engafani. Njengomthetho, uhla eyisisekelo nemisebenzi eyenziwa ngumuntu isimo esinjalo, kufakwe hlangana ukubandulwa nokuvikelwa jikelele izithakazelo okuyinto bengayi, ngenxa yezizathu ezihlukahlukene ukunikeza umzali oqondile. Umphathi alinalo ilungelo shift imithwalo yabo kwabanye abantu, njengoba imisebenzi kwakhona siqu. Izinhlelo ezivamile zalo mkhuba ukuqoka umqaphi umuntu unquma ukuthatha ukunakekela ingane kwesokunxele ngaphandle abazali. Imisebenzi ziyavumelana sivikelwe, ngemva kwalokho kukhona umuntu nokuqokwa njengelungu trustee.
Mayelana ngubani ingasungulwa sivikelwe?
Ngokuvamile, umkhuba sivikelwe iyosebenza izingane abaye bashonelwa abazali babo. Kodwa-ke kubalulekile ukucabangela amaphuzu amabili. Okokuqala, nokuqashwa Kumiswa kuphela ngaphezu bayizakhamuzi azifinyelelanga iminyaka engu-15. Okwesibili, ukuqokwa kwe-trustee ukuphila komuntu kungenzeka nabazali ezincane. Isibonelo, lokhu uvunyelwe uma sekube bokuhlukaniswa ilungelo lobuzali, kanye uma ukungakwazi we uyise nonina. Ngaphezu kwalokhu, trustee kanye trustee angaqokwa maqondana abadala. Kulokhu, lisho abantu abangenalo ithuba ukuzinakekela futhi avikele amalungelo abo. Lesi sibonelo sikhombisa ukuthi umphatheli ayikwazi kubhekwe njengendlela esikhundleni abazali. Abantu abanjalo bangase enze ingxenye kuphela imisebenzi yabo ngokuya ukunakekelwa, ukunakekelwa kanye nosizo emkhakheni ezihlukahlukene yasekhaya.
Umthwalo oyinhloko trustee wukuqinisekisa bekhulisa efanele. Lokhu kusebenza ikakhulukazi ilungelo lokuhlala nezingane. Umndeni ka Ndoda, ubani ithathe lezi zibopho kufanele ukudala izimo zokuphila eyamukelekayo. Ngaphezu kwalokho, umnakekeli kumelwe beqondisa lesigceme, ukuthi wayefuna ezamasiko nokungcebeleka ngokuhlakanipha imali yabo. Imisebenzi umphatheli sihlanganisa ngesikhathi esifanele ukwelashwa azithathe ugcine ingane, futhi uma kudingekile, kuvikeleke izidingo zakhe phambi kwezinkantolo.
Ngokusho imithetho, umqaphi ukuqinisekisa nokuhlalisana nesigceme. Akubalulekile ukuthi yokuhlala kuyinto efulethini noma indlu ingane. Ezimweni ezivamile lapho abalondolozi abayiswe izingane emakhaya abo. Nokho, ezimweni ezehlukile, abaqondisi anganika ngayo imvume futhi ngokuhlukana. Kodwa kulo mongo kubalulekile ukukhumbula ukuthi trustee - ungumuntu akufanele kuphela ukufundisa, kodwa ukudala izimo zokuphila ochumayo. Ngakho-ke, isakhiwo esihlukile kuvunyelwe uma lesigceme isivele engu-16 ubudala, futhi aguqulelwe abaphilayo ozimele.
Ingabe kukhona izibopho ezibonakalayo?
Ama-Trustees aye abanalo nezibopho maqondana okuqukethwe impahla nabantu abasesimweni abawanakekelayo. Zonke izindleko imali, okuyinto akhiqizwa kubo ngokuhamba yeziboshwa, kufanele ibuyiselwe kusukela ezimalini lesigceme. Ikakhulukazi, ingasetshenziswa impesheni, umthobanhliziyo, ukondla obushade naye emuva kwesehlukaniso, nokunye. D. Uma ziyamaniswa nokungangeni wokwaziswa bengekho, emizimbeni sivikelwe ukhombe yesondlo izibonelelo ekhethekile. Lesi sibonelo sikhombisa ukuthi umphatheli - ke okungenani hhayi umzali, kodwa umuntu ongalawula imali Othenjwayo ubuso. Yiqiniso, kufanele zonke izindleko yenzelwe kuphela ukugcinwa lesigceme - isibonelo, kungenzeka usesitolo ufuna izingubo zokugqoka, ukudla. Ngaphezu kwalokho, Trustee Kumele zibike njalo ngonyaka emagunyeni sivikelwe ngakho uchitha kanjani imali. Lo mbiko, isibonelo, kufanele kube lodumo namarisidi, namarisidi yokukhokha kanye namanye amadokhumenti eqinisekisa izindleko isizathu sazo ehlosiwe.
Ngaphezu imisebenzi, umthetho civil unika abanakekeli kanye namalungelo sasivumela olunzulu, Nokho, okuyinto, futhi ubheke imisebenzi yabo oqondile. Ngokwesibonelo, kuyi-trustee kungase ngokubona kwayo ukunikeza lesigceme ezikhungo ezithintekile zokufundisa nokuqeqesha. Kungaba izinkulisa, zemidlalo kanye nezikole. Njengoba umphatheli amalungelo avumele ukuba zitshele lo ukubuya lesigceme kusukela umuntu onesitifiketi ngaphandle ngezizathu zomthetho. Uma sikhuluma evikela amalungelo esigcemeni, zingase wezwakalisa njengoba nje ekunqanyulweni kwe izivumelwano aphula umthetho izithakazelo zayo.
Ngokwesibonelo, uma lesigceme isivumelwano bebodwa, okuyinto ephambene namalungelo akhe, trustee angamisa kuthengiselana. Kule ndaba, kumelwe sikhumbule ukuthi umqaphi iyona ungummeleli wezomthetho lesigceme futhi ongenza egameni ukuthengiselana zayo ezingokomthetho. Kodwa lapha, kuyaqondakala izici ezimbili. Okokuqala, i-trustee ingenza ukuthengiselana okunjalo kuphela izithakazelo lesigceme. Okwesibili, kumele zonke izenzo ezinjalo eyenziwa hhayi endaweni, futhi kanye party lesigceme.
Kumele siqale nge yokuthi, ngokomthetho, izakhamuzi nezinhlangano ezifanele ukuthi ubikele ukuze guardianship amacala lapho abantu beswela ukunakekelwa efanele. Ngokwesibonelo, lapho bengane afe. Ngemva kwalokho luhlolo yesimo somuntu futhi yakwamukela isinqumo kuthuthwa yayo kulelo khaya lezintandane noma ikhaya lezingane ebhodini. Ngasikhathi sinye kungenzeka imisebenzi eyabelwe ephathini esitokisini lwesithathu. Lokho, ngenkathi hhayi kuyonqunywa isiphetho ukunakekelwa kwezingane kanye nokufunda bazibandakanye abalondolozi. Ama-Trustees aye zabantwana bakwa akuzona abamiswe ezimweni lapho boarding, isibonelo, lokuhlangana ngokugcwele ukuqeqeshwa.
Ngubani kungaba umphathiswa?
Ngokusho nezidingo nokuqashwa, imisebenzi umnakekeli ungakwazi kuphela ukwenza omdala futhi izakhamuzi ekwaziyo. Kulokhu, uhlu libanzi impela mani ngolunye uhlobo lothando. Njengoba umnakekeli - umuntu ukwenza ezemfundo izingane, imisebenzi efana awavunyelwe abantu atholakala enamacala, uyobhekwa njengonokuqonda isifo esingelapheki zokusetshenziswa kabi kotshwala noma yizidakamizwa kanye. Futhi iziphathimandla sivikelwe ungacabangi izicelo imisebenzi umphatheli ukuthi yayikade ngaphandle ezindabeni ezinjalo noma bancishwa amalungelo sabazali.
Nakuba izimo iningi sivikelwe isikhungo libhekisela guardianship izingane kanye nabantu ehlatshwa, kulawulwa umthetho, futhi ngakolunye uhlangothi, ukondla nokuvikela impahla. Nokho, kulesi simo, trustee kanye trustee futhi enze imisebenzi ehlobene bekhulisa nokunakekela oswelayo. Ukulondolozwa impahla isivele umsebenzi yesibili. Kodwa lokhu akuzange ukuthambisa izidingo ezifanele imisebenzi yalolu hlobo. Ngakho, uma iziphathimandla sivikelwe kuyotholakala ukusebenza ukungadli imisebenzi ku nokuvikelwa kwempahla isigceme noma achithwe noma alahlwe ezingafanele izinto zayo ezibonakalayo, kungenzeka ezilandelwayo izenzo isinxephezelo ngenxa yomonakalo.
Naphezu senqubo enzima wokusungula sivikelwe, kukhona izinto ezingafaneleki njalo ngokwanele kunakwe emagunyeni afanele. Iqiniso ukuthi Umphathi ezincane, ngaphezu zonke izidingo ezikhonjwe, ube izimfanelo zokuziphatha, okungaba nzima ukunquma. Umsebenzi nezingane, okubandakanya lemfundvo nekunakekelwa, ke aqede ukuziphatha okubi umnakekeli. Ngeshwa, akwenzeki ngaso sonke isikhathi ukuthola izimpawu ezifana at the stage of londolozi. Ngenxa yalesi sizathu, umThetho kule ndawo ihlose ukuheha iqhaza ngaphezulu bahlali abangakwazi neqhaza elibalulekile ukuze ukuhlonza emikhayeni enezinkinga.
Kombuso ka-Israyeli ukuthi ungathola kanjani? Izindlela nezinqubo ukuthola
Ukwahlukanisa izingubo. Izidingo kanye nenhloso izingubo yesimanje
Kanjani ukusuka Penza ukuba Samara?